“ကျနော့်ရဲ့ညနေခင်းလေးများ”(ဓါတ်ပုံပိုစ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » “ကျနော့်ရဲ့ညနေခင်းလေးများ”(ဓါတ်ပုံပိုစ်)	16
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 3, 2015 in Photography, Travel | 16 comments
ဟိုအရင်နှစ်များက မနက်စောစော ထပြီး လမ်းလျောက်ဖြစ်ပါတယ်။
2014 ကတည်းက လမ်းမလျောက်ဖြစ်သလောက်။
အခုဒီ ကျယ်ခေါင်ရောက်တော့ ဆောင်းဒီဇင်ဘာ။
လမ်းလျောက်ရင်းက ညနေခင်းလေးများကို ပိုသဘောကျသလိုပါဘဲ။
အဲတော့ ညနေခင်းမှာ ရိုက်ဘူးတဲ့ ပုံလေးတွေကိုပြန်စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
2 ခင်ဝမ်းဆိုဘူးတဲ့ ခရမ်းနုရောင်
3 ပြိုတော့ မယ်
5 နှစ်ဦးကြား ဗျာများနေသလို
6 ရွှေရောင် ညနေခင်း
ရာမည says: စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဦးလေး
တောင်သမန်ရယ် တိမ်ရယ် နေလုံးရယ်
မန်းတလေး တရိစ္ဆာန်ရုံထဲဝင်ပီး မျောက်တွေကို ရိုက်ပြပါလားခင်ဗျာ
မြစပဲရိုး says: . မျောက် ကို ရိုက်ခွင့်မရရင် ကိုကိုလေး က မော်ဒလယ် လုပ်ပေးလိုက် ကွယ်။ jk lol:-)))
မြစပဲရိုး says: သများ လဲ မနေ့ည က “လ” ကို ရိုက်ထားသေး။
. အောက်ဆုံးပုံလေး က လွမ်းစရာလေး။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လက တော့ ရိုက်ထားတာ ကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူး သေချာလဲ မရိုက်မိသေးတာအမှန်ပါဘဲ
လ နဲ့ ပါတ်သက်ရင် မှတ်မှတ်ရရ တစ်ရက်ဘဲရိုက်ဘူးတယ်
2013 တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် နေ့က ရွာသား ကြီး ဂန္ဓာရီ ဆရာအုပ်လာတုန်းက
တောင်သမန်အင်းမှာ ဦးပိန်တံတားနဲ့ တွဲ ရိုက်ထားတာ ဘဲ ရိုက်ဘူးသေးတယ်
နောက်လပြည့် ည လို့ရက်မျိုးမှာ အောင်ပင်လယ် ဘက် ထွက်ရိုက်အုံးမယ်
Ma Ma says: ညနေခင်းပန်းချီကားလေးများးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ် မမ ရေ
ကျနော်က မနက်ခင်းနဲ့ ညနေခင်းဘဲအားလပ်တော့ ဒီအချိန်ဘဲ ရိုက်ထားတာများတယ်
အများအားဖြင့် ဓါတ်ဖမ်းသူများကလည်း မနက်ခင်းစောစော နေပွင့်စ အချိန်နဲ့
Courage says: ခရမ်းပြာရောင် ကောင်းကင်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
နေ့တစ်နေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးသော တောက်ပခြင်းပေါ့
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဲဒီခရမ်းပြာရောင် ကောင်းကင်လေးက ကံကောင်းလို့ ရလိုက်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်
ဓါတ်ဆရာမိတ်ဆွေတစ်ယောက် မူဆယ်ကိုရောက်လာတော့ ကျနော်က ဓါတ်ပုံရိုက်ဘို့ သူကိုသွားခေါ်ပါတယ်။
မိုးအုံ့နေတော့ သိပ်မြင်ကွင်းမလှ ဖြစ်နေတော့ သူပြန်မယ်ဆိုတာနဲ့ လိုက်ပို့ ပြီး ပြန်အလာမှာ
ကောင်းကင်က အရောင်တွေပြောင်းပြီး လှ လာတော့ ဒီပုံလေးကို ရလိုက်တာပါ
ပုံကောင်းတစ်ပုံရဘို့ဆိုတာ အချိန်အခါ ကောင်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ဘို့ ကလဲ အလွန် လိုအပ်ပါတယ်
Alinsett @ Maung Thura says: 1,2,5,7
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်ကတော့5နဲ့7ကိုကြိုက်တယ်
Mike says: .ကျုပ်လည်း၅ နဲ့၇ အကြိုက်ဆုံးပဲဗျ…ရသတစ်မျိုးခံစားရလို့
အဲဒီနံပါတ်ငါး နေလုံးနဲ့ သစ်ပင်ရိုက်တုံးက အဲ့နားလေးမှာအတော်ကြာကြာ ရိုက်ဖြစ်တယ်
အဲဒီ အပင်နားကို သွားချင်လို့ ၀င်ခွင့်တောင်း တာပေးမ၀င်ဘူး
ကြားမှာရေမရှိတဲ့ချောင်းနဲ့ အုတ်တံတိုင်းတစ်ခု ခြားထားတယ်။
သစ်ပင်နဲ့ နေလုံးကို ဟိုဘက်ထားလိုက်ဒီဘက်ထားလိုက်နဲ့ပုံပေါင်းများစွာ
ဒီပုံလေးရတဲ့ နေ့ က စိတ်ထဲမှာအတော်ကျေနပ်မိတယ်။
တောင်သမန်က သစ်ခြောက်ပင်နဲ့ နေလုံးကိုတွဲ ပြီးရ လိုက်တုံးကလဲ အခုလိုဘဲ ကျေနပ်ခဲ့တယ်
aye.kk says: ကိုပေါက်ရေ..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ်အမ အေး ခရမ်းနုရောင်တိမ်အလှ က ရွှေလီတံတားပေါ်မှာ မထင်မှတ်ဘဲရလိုက်တာပါ
မိုးတွေအုံ့လို့ ပြန်လာခဲ့ပြီးမှ နောက်တစ်ခေါက်အဖြတ်မှာ ဒီပုံလေးရလိုက်တာပါ
တောင်သမန်အင်းဆိုရင် အများအားဖြင့်အနောက်ဘက်ခြမ်း ကိုဘဲရောက်ပါတယ်
ကျနော်တို့ကတော့ နေထွက်ချိန်ဆို အနောက်ဘက်က လာ
နေ၀င်ချိန်ဆိုအရှေ့ ဘက်ကိုသွား အဲလို စောင့်ရိုက်ပြီးရခဲ့တာပါ
အောင် မိုးသူ says: ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ချင်စရာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်က ရူ့ခင်းသမားဆိုတော့ မြင်မြင်သမျှ ရိုက်မိတာအမှန်ပါဘဲ
တံတား ပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတဲ့ မြစ်ပြင်မြင်ကွင်းရှိသေးတယ်